Thola Isibuyekezo Samahhala Sebhulogi Yakho noma Isayithi | Martech Zone
NgoLwesibili, Septhemba 7, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ubeke umzamo omkhulu kusayithi lakho lebhizinisi noma ibhulogi yebhizinisi, sekuyisikhathi sokuyishuna. Sibhale ukubhaliswa kweCorporate for Dummies ukusiza amabhizinisi ukuthi asebenzise amabhulogi ukuze akhe igunya futhi athole imikhondo online. Yize lencwadi igxile kuma-blogging naku-blogging platforms, imibono iyadlulela kuwebhusayithi yenkampani kuze kufike ekhasini lokufika lokukhokha njalo.
Abaningi benu sebevele baqala ukuyifunda le ncwadi futhi nempendulo ibijabulisa. Besazi ukuthi sinomthengisi othengisa kakhulu - kepha asibonanga ukuthi incwadi izokwamukelwa kahle kanjani. Abanye abantu bazibhalile mathupha futhi basazise ukuthi ithrafikhi yabo kanye nokuguqulwa kwabo sekuvele kubhulogi yabo kungakapheli amasonto bethumele amanye amasu. Kuyesabeka!
Lokho esingakubonanga kuze kube manje, noma kunjalo, ukubuyekeza Amazon, Imingcele, UBarnes noNoble, Ama-Goodreads, I-Shelfari, Futhi Glue.
Uma ubuyekeza lencwadi online, sizobuyekeza isayithi lakho noma ibhulogi yethu futhi sikunikeze ngempendulo eyakhayo maqondana nokuklama, ukwenza kahle izinjini, ukusetshenziselwa ukuguqula kanye nomthelela jikelele. Sizokwenza ngisho kubhale ngokuthunyelwe bese uchazela abafundi ukuthi yini oyenzayo. Sasivame ukukwenza lokhu kule bhulogi futhi sikubize ngokuthi "Ukubhuloga Ibhulogi"… futhi bakwenzela okuthunyelwe okuhle!
Umthetho kuphela ukuthi wena kumele ngabe ngifunde Ukubhuloga Kwebhizinisi KwamaDummies futhi kufanele uthumele ifayela le- isixhumanisi sokubuyekeza kumazwana walokhu okuthunyelwe. Uma usukwenzile, sizoqala. Uma ufaka umsebenzi othile kusibuyekezo sakho, sizofaka omunye umsebenzi kwesakho!
Tags: ngamafuumlandoukuhlaziywa kwebhokisi lokungenayoukubuka kweselulabuyisela enye indlelaIzizwe
Sawubona bafana, ngiyajabula ukunibona eBlog Indiana futhi ngiyabonga ngokungilethela uVitamin Water. Ngingena nje encwadini, futhi yikho konke ekwethembisa ukuba yikho.